‘फूड कोमा’: खाना खाएपछि किन लाग्छ निद्रा? – Health Post Nepal
‘फूड कोमा’: खाना खाएपछि किन लाग्छ निद्रा?
२०७८ चैत २ गते ७:२४
काठमाडौं–खाना खाएपछि अधिकांश समय हामी निद्रा लागेको महसुस गर्छौं। नेपाली परम्परामा यसलाई ‘भात लागेको’ भन्ने चलन छ। यो स्थितिलाई ‘फूड कोमा’ भन्ने गरिन्छ। चिकित्सकीय भाषामा भने यसलाई ‘पोस्टप्रान्डियल सोमनोलेन्स’ भनिन्छ।
के हो फूड कोमा?
खाना खाएपछि थकान र निद्राको अनुभव हुन्छ। अधिकांश दिउँसो खाना खाएपछि यो लक्षण देखिन्छ। यो अधिकांश मानिसमा देखिने समस्या हो।
इनर्जी लेभल कम हुनु
कुनै काममा केन्द्रित नहुनु
भाषागत रुपमा कोमा भनिए पनि यसमा मानिसको होस हराउँदैन। मात्र सांकेतिक रुपमा कोमा भनिएको हो।
फूड कोमाका बारेमा खासै अनुसन्धान भएको छैन। तर यसकोकारणका बारेमा कैयौं सिद्धान्त चर्चामा ल्याइएका छन्।जस्तोः
रक्तसन्चारमा परिवर्तनका कारणः पेटमा रगतको सञ्चार बढ्दा दिमागमा रगत कम पुग्छ, जसका कारण फूड कोमा हुनसक्छ। तर यो सिद्धान्तका बारेमा वैज्ञानिकले चुनोती दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार भारी शारीरिक अभ्यासका बेला शरीरभर नै समान रक्तसन्चार कायम गर्न सकिन्छ भने खाना खाएपछि रक्त सन्चारको परिवर्तनसम्भव छैन।
बढी खाना खाएका कारणः अधिकांश मानिसहरु धेरै खाना खाएपछि फूड कोमा भएको बताउने गर्छन्। तर, कैयौं अनुसन्धानले धेरै खाना खाएपछि निद्रा नआउने समस्या देखाएका छन्।
कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो र प्रोटिनको बढी मात्राका कारणः यी पोषकतत्वले निद्रा बढाउँछन्। उदाहरणका लागि कार्बोहाइड्रेटले रगतमा अमिनो एसिड ट्रिपटोफिनको मात्रा बढाउँछ, जसबाट स्लीप हार्मोन सेराटोनिनको मात्रा बढाउँछ । प्रोटिनयुक्त खानामा पनि ट्रिपटोफिन बढी हुन्छ। चिल्लोबाट कोलेसिस्टोकिनन हार्मोनको मात्रा बढ्छ। जसबाट निद्रा आएको अनुभव हुनसक्छ।
शरीरको प्राकृतिक रिदमः हाम्रो शरीरको घडी २४ घण्टाको हुन्छ। अनुसन्धानका अनुसार राति सुत्ने चरणका साथै दिउँसो पनि सुत्ने एक चरण हुन्छ। अपरान्ह २ देखि ४ बजेको बीचमा यो चरण हुन्छ, तर निद्रा लाग्दा मानिसको कार्यप्रणालीमै असर पर्न सक्छ। यसले सडक दुर्घटना पनि निम्त्याउनसक्छ।
फुड कोमाबाट हुने हानी
फुड कोमा सामान्यतः खाना खाएपछि ४ घण्टासम्म रहन्छ। यसबाट हुने थकान र निद्राको स्थिति कुनै अवस्थामा खतरापूर्ण पनि हुनसक्छ। गाडी चलाएको बेला या मेसिन चलाएको बेला यस्तो स्थिति आउनसक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ।
यस्तै, खाना खाएपछि निद्रा आउनुले मधुमेह रोगलाई पनि संकेत गरेको हुनसक्छ। यसैले ब्लड सुगर लेभल चेक गर्नुपर्छ।
फुड कोमाबाट कसरी बँच्ने?
बढी खाना खानबाट बँच्नुपर्छ
डाइटमा सबै पोषकतत्व सामेल गर्नुपर्छ। अस्वस्थकर खानाका कारण फुड कोमा सिर्जना हुनसक्छ।
मदिरा सेवनबाट बँच्नुपर्छ। यसले रातको निद्रा बिगार्छ र दिउँसो निद्रा लाग्छ।
धेरै पानी पिउनुपर्छ। शरीरमा पानीको कमी भएन भने थकान पनि हुँदैन।
यदि निद्राले काममा बाधा गरेको छ भने आधा घण्टा भए पनि सुत्नुपर्छ, जसले ताजा बनाउन मद्धत गर्छ।